Ngisho nokuzenzela okuphelele kakhulu ngeke kuphelele ngaphandle kokuthi izindebe zidwetshwe. Futhi ngezindebe ezinhle akudingi nje kuphela i-lipstick, kodwa futhi ukhona ipensela yomjikelezo. Lesi sibonakaliso esibonakala sengathi asiyinkimbinkimbi singenza izimangaliso ngemizuzwana embalwa nje.
Ngaphambi kokuthenga ipensela, kudingeka ufunde ukwakheka kwayo. Ngepensela enhle ye-contitative, kufanele kube khona i-wax (ubhontshisi, abisiliconsi noma iprotheni ingxenyeni yepensela), amafutha ahlukene namavithamini. Kuye ngephesenti yalokhu noma leyo ngxenye, amapensela ahlukene atholakala. Njengoba izithasiselo emapensela zengeza ama-hydrogenated, njengamasundu, ikhukhunathi, i-castor, imifino. Basiza ukuvimbela ukomisa isikhumba sezindebe, ikakhulu ebusika.
Ngezinhloso ezifanayo, i-aloe vera, i-vitamin E ne-C yengezwa emapensela. Uma kukhona inqwaba ye-wax ipensela yakho, umugqa othole futhi odwetshiwe uzohambisana kahle futhi ngeke ushayeke ekulandiseni. Umbala wepensela uxhomeke kunani ledayi elifakiwe. Kuzo zonke izinto ezishiwo, singaphetha ngokuthi ipensela ye-contour ayadingekile ukwenza nje ukuthi umlomo womlomo uhlanzeke, ulungile futhi uhle, kodwa futhi kufanele unakekele kahle izindebe. Futhi, umsebenzi wepensela ukuvimbela ukusabalalisa kwe-lipstick ezindebeni.
Uma uthenga i-lip liner, uhlole ngokucophelela, zama ukudweba umugqa esihlakalweni bese ubheka ukwehlisa kwentamo. Ipensela yekhwalithi kufanele ihlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:
Ipensela yamapensela kufanele ibe yinkimbinkimbi kanzima futhi ilula kancane. Uma ipensela inzima, khona-ke ingakwazi ukuqala kalula isikhumba esibucayi sezindebe. Uma ithambe kakhulu, umugqa uzosakazeka futhi izindebe zizobukeka zingaboni kahle. Ngokuntuleka kwe-wax, ipensela izoba eyomile, futhi lokhu kuqukethe iqiniso lokuthi umugqa odwetshiwe ngeke ube wunifomu futhi uzoqhekeka uma ukhuluma noma uhleke.
I-griffin ingaba nobubanzi obuhlukile. Amapensela amancane angasetshenziswa nje kuphela njengepensela yesikhulumi, kodwa futhi njenge-lipstick. Ukuhola okuncane kusetshenziselwa kuphela ukusebenzisa umugqa ocacile nowomzimba. Ngokuvamile, la mapensela asetshenziswa ochwepheshe.
Ukukhishwa kwepensela kungenziwa ngezinto ezahlukene: izinkuni, ipulasitiki, noma ngaphandle kokwandiswa okuzenzakalelayo. Uma ukhetha inguqulo ye-classic - ipensela yezinkuni, qinisekisa ukuthi igobolondo lenziwe ngamapulangwe athambile. Lokhu kuzokwenza ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga ukushaya ipensela. Ungawathengi amapenseli ngesikhanyiso esakhelwe ngaphakathi - ukusithinta, ukuhola okuphambanisayo kuzoqhuma.
Imaminithi embalwa ukutadisha ukubunjwa nokubukeka kwepensela kuzokusiza ukuthi ukhethe ncamashi leyo ongayenza ngayo umlomo omuhle.
Indlela yokukhetha ipensela
Kuye ngokuthi ukuhlala kwamapensela kungapheli kangakanani, kunamandla okumelana nokumelana namanzi. Lokhu kuzosiza ukugwema umdwebo ongadingekile ngemuva kokudla.
Kulula kakhulu ukukhetha ipensela ye-lipstick: kufanele kube yikhombo elifanayo njenge-lipstick noma elimnyama kunezintambo zomlomo, kodwa akusekho. Uma kungenjalo, ukungafani okuqinile ngeke kudlale kuwe. Ukuqhathaniswa okulula kulula kuphela ukuzenzela kusihlwa. Uma uhlela ukusebenzisa i-lipstick, kodwa i-gloss gloss, khona-ke kulokhu, ithoni ipensela ikhethwe ngaphansi kombala wesikhumba sezindebe.
Indlela yokusebenzisa le contour ngokufanele
Kunemithetho evamile okufanele ilandelwe ukudweba indlela. Okokuqala, emlenzeni ophezulu, igqoko lenhliziyo ludonseleka, lenze kube lula. Khona-ke imigqa iholwa ezinhlangothini kuya emaceleni ezindebe. Umlomo ophansi kumele udonswe ngomunye owodwa ngaphandle kokuphakamisa ipensela. Uma umugqa udonswa ngokungalungile, ke akudingekile ukuwulungisa. Kungcono ukusula nokudweba okusha. Ipensela ye-contour ibaluleke kakhulu, ngoba nalo ungashintsha isimo sezindebe, kokubili kokubili kanye kokubili. Ngezindebe ezigcwele ngokweqile, udwebe umugqa wendwangu 1-2 mm ngezansi kwemigqa yemvelo. Lokhu kuzosiza ekubukeleni ukwehlisa izindebe. Uma izindebe zincane, khona-ke umgca kufanele udonswe kancane kunemvelo.
Uma uthola ipensela yekhwalithi engcono, izindebe zakho zizobe zihle kakhulu futhi zilungiswe kahle, futhi ukumamatheka kuyobe kungenakuvinjelwa.
I-Alunite - indawo engokwemvelo yabaphili bama-antiperspirants kanye nama-deodorants
Izitho zomzimba zokuhlobisa
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanele zesikhumba esincane
Izimonyo zaseKorea nge-snake nokukhishwa kwenyoka: okungcono?
Amakha odumile avela kuJennifer Lopez
Kanjani kahle ukusebenzisa i-blush?
Ukukhethwa kwemimoya kuye ngokuthi ubumnene
I-intanethi ihleka ingxenye ye "bloopers" entsha esuka ku-Anastasia Volochkova, ukukhetha isithombe
Indlela yokudweba kahle izipikili zakho ekhaya?
Iklabishi iklabishi isobho
Umshado ongalingani: uma umuntu esekhulile kakhulu
I-progesterone ephansi: imbangela nemiphumela
Ukugoma izingane ngokumelene nomkhuhlane
Ikhekhe le-apple-grape eliphethwe inkanyezi
Izindlela zokwelapha zezinwele zezinwele
Izicathulo zomshado zibukeka kanjani?
Umswakama omuhle ngobisi oluncibilikile
Ukusika ushizi nenyama
Ring njengoba isipho - ukubulala ngaphambi komshado?
Inhlanganisela yemibala ngaphakathi kwekhishi
I-Child-bully: iseluleko sabahlengikazi ekuxazululeni inkinga
I-Corn Pie ne-Basil